Ikhowudi yokuHlonipha kunye neNkcubeko: I-Inside Khangela kwiZikolo ezizimeleyo
by UStacy Jagodowski
Ikhowudi yokuHlonipha kunye neNkcubeko
Njengoko bobabini abaphumeleleyo kunye nomntu oye wanikezela ubuninzi bezemisebenzi yam bucala kwizikolo ezizimeleyo, ndiye ndazibona ngenye indlela yokusebenza kwangaphakathi kwezi ziko. Yintoni eyenza baxake, kwaye kutheni iintsapho ezininzi zikhetha ukutshala imali ekuthumele abantwana babo kubo? Makhe sijonge ezinye iikhowudi zokuhlonipha ezifunyenwe kunye nezithethe ezingenakwenzekayo ezikolweni ezizimeleyo.
Uninzi lwezikolo ezizimeleyo zinomnye uhlobo lweKhowudi yoHloniphelo enikeza isakhelo sabantwana ukuba bafumane indlela yokuziphatha nobomi. Kwi-Chatham Hall, abafundi baneCode yoHloniphelo ekungundoqo kwesazisi esikolweni. Iimpawu zentlonelo kunye nenhlonipho ziquka into engabonakaliyo, ingcamango "yeflegi emhlophe," ithetha ukuba akuyiyo yakho, iyanqanda umda. Indlela elula kodwa inzulu ekuphuhliseni uluntu lwethemba. Isikolo sixabisa kakhulu inyaniso kunye nokunyaniseka kwaye sikhuthaza abafundi bayo ukuba ngabahlali abanomdla kunye nabaphakamileyo.
E-Cheshire Academy, apho ndisebenza khona ngoku, sinemigodi eyisibhozo yase Bowden, idumiso kwiHorden Hall, indlu yesikolo endala kakhulu kusetyenziswa ngokuqhubekayo kwi-Connecticut. Eyakhelwe ngo-1796, namhlanje isakhiwo sitena sinamasebe amanyathelo olawulo, kuquka iNtloko yeSikolo, i-Ofisi yoRhwebo, i-Ofisi yoPhuhliso, kunye neQela loThengiso lweNtengiso kunye neNxibelelwano. Isakhiwo esichazayo sakhiwo sisibhozo sesibhozo sesibhozo, esanikezela ukuphefumlelwa kweeNqwelomba ezisibhozo ze-Bowden: Uxanduva, iNhlonipho, Ukukhathalela, uLuntu, uLuntu, uLungileyo, ukuLungisa kunye nokuThenjwa.
Njengomfundi eWilbraham & Monson Academy eMassachusetts, ndafumana indlela yokuqala yamasiko endala. Ndiyakhumbula ukuhamba ngekampus kwaye ndiyayithanda ngamakhulu amatye aqingqiweyo adibanise iintonga zitena kulo lonke i-campus. Lawa matye ahlukeneyo amele umntu ophumelele eWilbraham & Monson Academy, kwaye ndikulangazelela umhla apho endinokubeka khona isitena sam kwaye ndishiye ifa lam emva kwesikolo.
Ndiyakhumbula ukufumana amaphephancwadi malunga namathuba okudweba. Izitena zangaphambili zazivezwe ngabafundi ngokwabo, kodwa kwixesha langoku, abafundi baqala ukuthumela izitena zabo ukuze baqeshwe. Abambalwa bam bafunda nabo bathetha ukuzithiba zabo, kodwa ndashiya isitena sam izandla ezithembekileyo zeengcali. Ndikhethile idizayini elula ebhalwe igama lam kunye neminyaka yokuya esikolweni. Isayithi elimangalisayo ukuhamba kwikampus kwaye ubone amatye amaninzi abamele abafundi kwiziko eliye labuyela ngo-1804.
Njengelungu le-faculty e-Chatham Hall, ndikhumbula ngokucacileyo ukuma ebumnyameni kwi-campus edibeneyo yesikolo samantombazana ase-Southern Virginia, elinde enye yezithethe zabo ezithandayo ukuqala. Njengoko ii-cicadas ziqhubekile kumgama kwaye isihlwele sihluthiwe, ndikhumbula ukuba ndiziva ndihlawule umqolo wam. Ndemi apha ndikhangele imikhosi eneminyaka eminyaka. Ndandiziva ngathi ndinikwe ukufikelela kwisangqa sangaphakathi sabantu abafihlakeleyo, kwaye ngandlela-thile, ndaye. Akubona wonke umntu ufumana ubungqina bezithethe ezingcwele.
Inyaniso eyaziwa ngeyona nto ngeCheshire Academy kukuba ikhowudi yokugqoka ehlelekile eyenziwa ngabafundi ibuyele kwiMfazwe Yomphakathi. Ngowe-1862, uMfundisi uSanford Horton wakhonza njengomphathi-ntloko kwaye wamisa i-Academy njengesikolo samabhinqa esikolweni. Abafundi bevela kumacala omabini emfazwe, iNyunyana kunye ne-Confederate, kwaye njengendlela yokudibanisa amacandelo amabini, iifom ye-blue cadet ne-gray imisiwe. Ngethuba abafundi namhlanje abanako ukugqoka iifom efanayo efanayo njengoko yayigqoke kwi-1800s, ikhowudi yabo yokugqoka ihleli iqukethe imibala eluhlaza okwesibhakabhaka neyimpunga ehlawula umvuzo kwixesha elibalulekileyo kwimbali yelizwe lethu. Kaninzi "
Yiyiphi i-International baccalaureate (IB) School?
IiNkqubo zeNyaka zeGap: Isikolo seSithuba seNkcazo seSikolo sabangasese
Ukukhuthaza ukuhluka kweNkcubeko kwiSikolo sakho
IsiKhosikazi sikaNqulokazi kaSolomon
Hlola iintlobo ezahlukeneyo zeGalaxies
Iyintoni into yokuhlambalaza? Inkcazo ye-slut ehlazo
Iindlela ezili-100 zokuthi 'Ndiyakuthanda' ngesiTaliyane
I-Electron Inkcazo - i-Khemistry Glossary
Inkcazo yoBungqina ngokuPhikisana
Ngaba Izilwanyana Zingazifumana Iintlekele Zendalo?
UMargaret Douglas, u-Countess kaLennox
I-Enzyme Biochemistry - Ziziphi i-Enzymes kunye nendlela eziSebenza ngayo